सफल जीवनका लागी जान्नैपर्ने १० प्रेरक भनाईहरु (भिडियो सहित) - ज्ञानविज्ञान
सफल जीवनका लागी जान्नैपर्ने १० प्रेरक भनाईहरु (भिडियो सहित)
जीवनमा सफल सबैलाई हुनु छ र यो राम्रो कुरा पनि हो । किनकि यो धर्तीमा जन्म लिईसकेपछी केहि न केहि उधम गर्ने पर्छ । सफलता सबैको चाहना, यहाँ सबैजना सफलहुन चाहन्छन् । यद्यपि सफलताको बाटो त्यति सहज छैन तर सम्भव भने पक्कै छ । कडा परिश्रम पछि सफलताप्राप्त गर्न सकिन्छ, कहिले काहीँ परिश्रमसँगै बाटोमा थुप्रै हतोत्साहीत गर्ने खालका नैरश्यता, पिडा एवम् उदाशिनताहरु भेटिन्छन् ।
तर, जब त्यो बाटोको अन्त्यमा पुगिन्छ, तब विजयीभावको आनन्द भेटिन्छ । उकालो चढ्न जतिगाह्रो हुन्छ उचाईबाट देखिने दृश्य सुन्दर हुन्छ । आफ्नो लक्ष्यको बाटोमा उभिएकाहजारौँ अवरोध पार गदैँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दा आफैँ प्रतिगर्व महसुस हुने गर्दछ । तपाई आफ्नै जीवनदेखि सन्तुष्ट र खुशीहुनुहुनेछ । अनिआफ्नै सफलताले आफैलाई पुरस्कृत गर्नुहुनेछ । सबैको चाहना सफलता नै भएपनि यसको परिभाषाभन्ने व्यक्ति – व्यक्तिमा फरक हुने गर्दछ । कुनै एक शब्दकोशले सफलतालाई लक्ष्यको खोजीको एक सन्तोषजनक उपलब्धीको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
उक्तशब्दकोशका अनुसार एक सफलव्यक्ति हुनको लागि आफ्नो लक्ष्यप्राप्तीको प्रयास गर्नुपर्दछ । र, त्यसको नतिजासँग सन्तुष्ट रहन सक्नुपर्छ । तैपनि यो परिभाषाले सफलताको शाब्दिक अर्थ व्यक्तिगत सन्तुष्टी मात्र हो, वा होईन भन्ने प्रश्नभने खडा हुनसक्छ । कहिलेकहीँ सफलताको आश गर्दा नैराश्यद पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा तपाइको उत्साह मर्ने गर्छ ।
सफल जीवनका लागी जान्नैपर्ने १० प्रेरक भनाईहरु : भिडियोमा हेर्नुहोस्
Topics #प्रेरक भनाई #सफल जीवन
Don't Miss it कालो मरिचको सेवनले क्यान्सर बाट छुटकारा – यस्ता छन् अचम्मका फाईदा
Up Next कसरी छुटकारा पाउने पेट फुल्ने वा डम्म हुने समस्याबाट ? थाहा पाउनुहोस्
2 hours ago Pradeep Karki
के तपाएकाे कपालमा चाँया छ ? यसरी हटाउनुहोस्
धेरैलाई कपालमा तेल लगाउन निकै मनपर्छ । हामी तेललाई कपाल झर्नेदेखि लिएर कपालका विभिन्न समस्याहरुको समाधानका रुपमा लिने गर्छौं ।…
कसरी सफल बन्ने ? आफूले आफूलाई कसरी प्रेरित गर्ने ? एकपटक अवश्य पढ्नुहोला
जीवन सधै एकनासले अगाडी बढदैन । जीवनमा उतारचढाव आइरहन्छ । जसको दिमाग स्वस्थ हुन्छ, उसले यस्ता उतारचढावलाई सहजै स्वीकार्छ ।…
पेट दुख्ने, अपच हुने , ग्यास्ट्रिक तथा कब्जियतबाट मुक्ति पाउन हीङकाे प्रयाेग गर्नुहाेस्
हीङमा औषधिय गुण हुन्छ । यसको सेवनले पेटसम्बन्धी बिभिन्न समस्याका लागि फाइदाजनक हुन्छ । हीङमा एन्टी अक्सिडेन्ट हुन्छ जसले पेट…
आफुले चाहेकाे कुरा कसरी प्राप्त गर्ने ? जान्रुहाेस्
हामी सबैमा केही प्राप्त गर्ने चाह हुन्छ । हामी जिवनमा केही बन्छाैँ, या केही गर्छाैँ भनेर लागीरहेका हुन्छाैँ । तर…
५ दिमाख खियाउने प्रश्नाेत्तर
हामी हाम्राे दैनिक जीवनमा निरन्तर काम गरिरहेका हुुन्छाै । र, हाम्राे दैनिक कामले हामाीलाइ निकै थकाएकाे पनि हुन्छ । यसै…
तपाईंले आफ्नो शरीरलाई विक्री गर्नुपर्‍यो भने मूल्य कति राख्नुहुन्छ ? पढ्नै पर्ने लेख
आउनुहोस्, एकछिन हाम्रो शरीरको मोलमोलाई गरौं । तपाईंको शरीरको मूल्य कति ? १० लाख, ५० लाख, एक करोड, पाँच करोड,…